ကိုယ့်ကိုယ်ကို သေကြောင်းကြံ မှု ဟာ ဘဝကို အရှုံးပေးတာလို့ ပြောကြပါတယ်
နောင်ဘဝမှာလဲ သံသရာ အဆက်ဆက်ပါမယ့် ဝဋ်ကြွေးဆိုတာလဲ သိထားကြပါတယ်...
ဒါပေမယ့် လူတစ်ချို့ ဘာကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်သတ်သေချင်ကြရတာလဲ?
အဓိကကတော့ လက်ရှိ ပြဿနာကို ရင်မဆိုင် နိုင်တော့တာပါ..
ဒီဘဝမှာ ဆက်လက် အသက်ရှင် ဖို့ ခံနိုင်ရည်မလုံလောက် တော့လို့ပါ..
ရင်ထဲမှာ နာကျင်ခံစား နေရတဲ့ ဝေဒနာက တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ ထုထည်ကြီးမားလာလို့ပါ..
နင်သေချင်လား လို့ မေးရင် အင်း သေချင်ပါတယ် လို့ ဖြေမယ့်လူ မရှိပါဘူး..
လောကမှာ လူတိုင်း အသက်ရှင်ချင်ကြတယ် ..အသက်ရှည်ချင်ကြတယ်...ပျော်ရွှင်ချင်ကြတယ်..
ဒါနဲ့များ ဘာကြောင့် ကြိုးစားပြီး ပြဿနာကို မဖြေရှင်းတာလဲ ?
လောကမှာ ဖြေရှင်းလို့ မရတဲ့ ပြဿနာ ဆိုတာမရှိပါဘူး..ဆိုပေမယ့် အချိန်လိုပါတယ်
အဲ့ဒီအချိန်အတွင်းမှာ အသက်ရှင်သွားဖို့ လုံလောက်တဲ့ ခံနိုင်ရည် လိုအပ်ပါတယ်..
ဘယ်ကိစ္စမဆို ပေါ့ပေါ့လေး တွေးတက်တဲ့ သူမျိုး
အတက်နိုင်ဆုံး ပျော်ပျော်နေတက်တဲ့ ဗီဇ ရှိသူမျိုး
စိတ်ထက်ခိုင်မာပြီး ငါ လုပ်နိုင်တယ် ဆိုတဲ့ စိတ် ရှိသူမျိုး
မေ့လွယ်သူမျိုး...စသဖြင့် အတွေးတွေ စိတ်အာရုံတွေကို တစ်နေရာထဲမှာ နစ်ပြီးမထားတက်သူ ဗီဇမရှိသူတွေက များသော အားဖြင့်တော့ သေကြောင်းကြံစည်တက်သူများ မဟုတ်ပါဘူး..
ဒါပေမယ့်..ဘယ်နေရာမဆို လိုတာထက်ပိုစဉ်းစားတက်သူ. ..
ဥပမာ..ငါဒီနေ့ ထမင်းသိပ်မစားလိုက်ဘူး ညအိပ်လို့ပျော်ပါ့မလား ဗိုက်များအောင့်မလား မနက်ထရင် မူးဝေနေမလား အလုပ်ထဲမှာ ခေါင်းကိုက်နေမလား..ဆိုပြီး ဘာမှမဟုတ်တာကိုပင် အရှည်ကြီး တွေးတက်သူမျိုး
ရယ်လွန်းရင် ငိုရတက်တယ်ဟု ဆိုကာ အပြုံးအရယ်ကို ခြွေတာတက်သူမျိုး
အဓိကကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအားနည်းသူမျိုး
ငါဒီအလုပ်မရရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ မိဘတွေဒုက္ခ မောင်နှမတွေ မျက်နှာငယ် အပြောအဆို ခံရတော့မယ် ဟု နေ့စဉ်တွေးကာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဖိအားပေးသူမျိုး
ထိုကဲ့သို့ လူမျိုး ရှိပါသည် တစ်နှစ်လဲ မမေ့ နှစ်နှစ်လဲမမေ့ ဆယ်နှစ်လဲ မမေ့..ပြန်ပြန်တွေးကာ ဝမ်းနည်းတက်သူ တသတက်သူမျိုး..
များသောအားဖြင့် တစ်ဦးထဲ နေကာ တွေးချင်ရာ တွေးတက်သူမျိုး စသဖြင့် ထိုကဲသို့ လူများမှာ ခံစားချက်ကို အရှိန်မထိန်းနိုင်ကာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်ဖို့ ဝန်မလေးတက်သူများ ဖြစ်တက်ပါတယ်..
တစ်ချို့သူများက ဒါလောက်လေးနဲ့ သေဖို့ စဉ်းစားတယ် အံ့သြစရာ ဟယ် ဟု ဆိုတက်ကြတယ်
တကယ်တော့ ကာယကံရှင်အတွက်မှာက ပြဿနာဆိုတာထက် ဒီပြဿနာအပေါ်ထားတဲ့ စိတ်ခံစားမှုအရှိန်က အဓိက ပါ..
အရှိန်က တဖြည်းဖြည်းမြင့်မားလာကာ သေချင်တယ် ဆိုတာကသာ ကြီးဆိုးလာတက်ကာ ထိုတဒင်္ဂ အတွင်းမှာ မျက်စိရှေ့ ပေါ်လာသမျှ ဝုန်း ဆို လုပ်မိသွားတက်ပါတယ်..
တကယ်တော့ တစ်ချက်လေး သတိလွတ်သွားမိရာက အစ ပါ..
အမြင့်က ခုန်ချဖို့ ဆိုတာ တဒင်္ဂအတွင်းမှု အလွယ်ကူဆုံး အဆုံးစီရင်မှု ပုံစံ လို့ပြောရမလိုပင်..
ကြိုးဆွဲချမလား ? ခက်ပါသည် မသေခင် မချိမဆံ့ ဝေဒနာ ခံစား ရမည့်အရေး
ဓါးနှင့်ထိုးမလား ? မလွယ် ကိုယ့်အသား နာအောင် လုပ်ဖို့ ကိုယ့်လက်က မရဲနိုင်ပေ
ဆေးသောက် ? နဲနဲဖြစ်နိုင်သည် သို့ပေမယ့် ဆေးရှာရမည် ပိုးသတ်ဆေး သောက်နိုင်သည် သို့သော် မခံနိုင်အောင်ပူလောင်ကာ မသေခင် အမြုပ်တစီစီ ထွက်ရမယ့်အရေး
ရေနစ် ? ရေမကူးတက်လျှင် ဖြစ်နိုင်သည် သို့သော် ရှာရဦးမယ့် ဘယ်မှာလဲ ဒါလဲ မသေခင် ရေမွန်းရဦးမည်
ကားတိုက် ? တိုက်စေချင်တဲ့ကားက တိုက်ဦးမှ ......
အမြင့်မှ ခုန်ချဖို့ လွယ်ကူတယ် ဆိုတာက အမြင့်ဆိုတာ ကိုယ့်အနားမှာပင် ရှိတာမို့ ကိုယ့်အိမ်ပေါ်က ခုန်ချတာလောက်လွယ်တာမရှိ..
ဒုတ် ဆို ခေါင်းနဲ့ မြေကြီး ဆောင့်တာနဲ့ ပြီးပြီ..
မည်သည့် အမြင့်နေရာမဆို ခုန်ချလိုက်တာနှင့် လုံးဝ စက္ကန့်ပိုင်းလေးအတွင်း သေစေနိုင်သည့် အလွယ်ကူဆုံး နည်းပင်..
ထို့ကြောင့် သေဆုံးချင်သူများ အများအားဖြင့် ဒီနည်းကို သုံးကြတာပင်
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိဖူးသည် မိသားစုက ဂရုမစိုက် အထီးကျန်သည်ဟု ထင်ကာ ညမအိပ်ဘဲ အတွေးလွန်တက်သူ.
တစ်ရက် ပြတင်းပေါက်ဘောင်ပေါ်ထိုင်ကာ သေချင်လိုက်တာ ခုန်ချလိုက်မယ်ဟု စဉ်းစားရင်း စိတ်ခံစားချက်နှင့် ညအိပ်မပျော်တာ ရောကာ ပြုတ်ကျသွားဖူးသည်..ဒါကြောင့် အဆုံးစီရင်တယ်ဆိုတာက တကယ်သေချင်လို့မဟုတ်ပဲ စဉ်းစားရုံနှင့် လဲ မတော်တဆ ဖြစ်တက်သည်..သူငယ်ချင်းက မသေပါ သို့သော် ဘဝတော့ သေသွားခဲ့သည်.. မှတ်ဥာဏ်လဲ ပုံမှန်မဟုတ်တော့သည့် အခြေအနေဖြစ်သွားခဲ့သည်..
ဒါကြောင့် စိတ်ခံစားမှုလွန်ကဲသူများမှာ သေရင်သေ မသေရင်ရူး တဲ့အထိဖြစ်ကုန်ကြတက်သည်..
ထိုသူများ မိုက်မဲ သည် ဆိုနိုင်ပေမယ့် အလွန်ပင် သနားစရာကောင်းသော စိတ်ခံစားချက်ပြင်းထန်လွန်းသူများ ပင်ဖြစ်သည်...
တကယ်တော့ ဘာကြောင့် စိတ်ခံစားချက် လွန်ကဲ တာလဲ ဟုစဉ်းစား စရာ..
လုပ်ကြံဖန်တီး ယူလို့မရတဲ့ စိတ်ဆိုတဲ့ အရာဟာ လူသားတစ်ဦး မွေးဖွားလာစဉ်ကာ ပင် ပါလာခဲ့တာမျိုးပင်..
သူ့ရဲ့ ခံစားချက်က သူ့ရဲ့ဗီဇ ပါ.. ဖျောက်ဖျက်ပစ်လို့ မရပါဘူး ဖျက်ဆီးပစ်လို့ မရသလို ထိန်းချုပ်ဖို့ ခက်ခဲ လွန်းကာ ဝေဒနာကို သာမာန်ထက် ပိုခံစား ရတက်ကာ အသိဥာဏ် ရုတ်တရက် ပျောက်ကွယ် တက်ပါတယ်..
အမှန်တော့ ..အဆုံးစီရင်ကြသူများမှာ တကယ့် တကယ်တမ်း သေချင်လို့ မဟုတ်ပါဘူး
သူတို့ ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကိုသာ သေဆုံးစေချင်ကြတာပါ..
ဒါပေမယ့် ခံစားချက်ကိုမထိန်းနိုင်ကာ ထိုနောက်ကို ခန္ဓာပါကာ ရုတ်တရက် အသိဥာဏ်ကွယ်ပျောက်ရင်း ဘဝတွေ စတေးရတဲ့အထိ ဖြစ်သွားခဲရတဲ့ သူများ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ....................................
ခံစားချက်မျှဖြင့် ရေးဖွဲ့သော ဒီစာမှာ အမှားတွေ အများကြီး ပါကောင်းပါနိုင်ပါတယ်..
ဘာကြောင့် ဒီစာရေးလဲ ဆိုရင် ကိုယ်တိုင်က ခံစားချက်လွန်တက်သူမို့ ရုတ်တရက်ဆိုတဲ့အချိန်မှာ အမှားတစ်ခုမဖြစ်သွားအောင် သတိ ဆိုတဲ့ အခြေအနေတစ်ရပ် နှင့် အသက်ရှင် နေရသူတစ်ဦးမို့ပါ..
ဘယ်လို သတိ မျိုးလဲ ဆိုရင် ပုံမှန် ကျမ်းစာဖတ်ခြင်း ဆုတောင်းခြင်း အားဖြင့် ဘုရားသခင်နဲ့ အမြဲ ထိတွေ့အောင် ကြိုးစား ခြင်းပါ လိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာလဲ ဘုရားသခင်နဲ့ စကားပြောပါတယ် သင် ဘာပြောပြော သူကြားနိုင်ပါတယ် သင့်ရဲ့ ခံစားချက်အစစ်အမှန်ကို သိတာ ဘုရားခင် ပဲ ရှိပါတယ် ဒါကြောင့်..ဘယ်လူမျိုးမဆို ကိုယ်ယုံကြည်ရာ ဘုရားမှာ ဝတ်ပြုခြင်းဟာ စိတ်ကို ချုပ်တည်းနိုင်တဲ့ တစ်ခုထဲသော နည်းလမ်းဆိုတာ............
Posted by အိမ်မက်စေရာ at 2:32 AM
ဟားးးကောင်းလိုက်တဲ့ပိုစ့် ဟုတ်ပ အိမ်မက်လေးရယ် အမှန်တွေပေါ့ကွယ်း)
လာဖတ်သွားပါတယ်။ ရေးထားတာ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး အားပေးနေပါမည်။
အင်း.. မှန်တယ်အိမ်မက်ရေ... ဒီရက်ပိုင်းလည်း ဒီသတင်းတွေကြီးကြားနေရတာ စိတ်မကောင်းဘူး :(
အမှန်တွေ ပဲ .. လူတိုင်း နားလည် ထားသင့် တယ်နော်
ဒီရက်တွေမှာ ဟော့ဖြစ်နေတဲ့ အလုပ်ပေါ့..